निधिसँग महतोको तुलना हुनै सक्दैनः पूर्वमेयर बजरङ्ग शाह - हिमाल दैनिक
अन्तर्वार्ता, निर्वाचन बिशेष
निधिसँग महतोको तुलना हुनै सक्दैनः पूर्वमेयर बजरङ्ग शाह
जनकपुरका मतदाताले राजेन्द्र महतोलाई मैथिली शब्दमा (बहरिया) बाहिरबाट आएको 'टुरिष्ट' उम्मेदवार भन्न थाले।
१६ मंसिर २०७४, शनिबार १८:०३
जनकपुर, म‌सिर १६
पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थाको विरुद्ध कांग्रेसले चलाएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षमा जीवन आहुती दिएका शहिद सरोज कोइरालादेखि कांग्रेसकै तत्कालिन महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिको कर्मथलो धनुषाधाम सँधै चर्चाको शिखरमा रह्यो। चाहे पञ्चायत विरुद्धको शान्तिपूर्ण आन्दोलन होस् वा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना हुँदै पछिल्लो कालखण्डसम्म गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पहिलो जननिर्वाचित राष्ट्रपति रामबरण यादवको सफल कार्यकालसम्म, धनुषाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर प्रभाव पार्न सक्ने नेता विमलेन्द्र निधि पनि एक हुन्।
चाहे कांग्रेसभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सिद्धान्तको पक्षमा माहोल बनाउन होस् वा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म अनुसार संविधानमा सबै जातजाति, भाषा, क्षेत्र, समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न निधिले सँधै नेतृत्वदायीसँगै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आए। नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निधि धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। तर, उनको जन्म र कर्मथलोमा मधेस आन्दोलनको राप र तापका भरमा सर्लाहीबाट चुनाव लड्न छोडी राजपाका राजेन्द्र महतो निधि विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरुबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाले अहिले जनकपुरमात्रै नभइ सिंगो मुलुकको ध्यान र चर्चा यहि क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको छ। कतिपय सर्वसाधारण मतदाता यी दुई नेतामा कसलाई मत दिने भन्ने सवालमा अलमल परिरहेपनि जनकपुरका प्रबुद्ध समाज भने विस्तारै निधिकै पक्षमा खुलेर अलमलमा परेका मतदातालाई स्पष्ट दिशा दिन थालेका छन्। यसै प्रसंगमा जनकपुरका पूर्वमेयर तथा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यष बजरङ्ग शाहसँग हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जनकपुरको पूर्वमेयर तथा समाजसेवीको हैसियतले यहाँको चुनावी माहोललाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
धुनषका चार निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जनकपुर उपमहानगरपालिकाका अधिकांश वडा र केही गाउँहरु मिलाएर तीन नम्बर क्षेत्र बनेको छ। यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र राजपाका राजेन्द्र महतो जस्ता राष्ट्रियस्तरका नेताहरु प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैकारण जनकपुरको यो क्षेत्रमा हुन लागिरहेको चुनावको प्रसंग अहिले धनुषामा मात्रै नभएर पुरै देशभरि नै चर्चाको विषय बनेको छ।
देशभरी नै चासोको केन्द्रविन्दु रहेको यस क्षेत्रका जनताको मनोभावनालाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ?
अधिकांश जनताको भनाइ यो क्षेत्रमा जस्ले पहिलेदेखि नै कामगर्दै आएका थिए र कर्मशील भए उनैले नै यस क्षेत्रका जनताको चाहना र भावना अनुसार केही गर्न सक्छन् भन्ने रहेको छ। न कि बाहिरको व्यक्ति आएर राम्रो गर्न सक्दैनन्। बुद्धिजिवी र पढेलेखेका व्यक्तिहरुको भनाइ पनि यहि रहेको छ कि यी दुबै नेताहरु हामीलाई चाहिन्छ। राजेन्द्र महतो मधेस आन्दोलन र मधेसका मागहरु सम्बोधन गर्न आन्दोलन गरे उनी पनि चाहिन्छ र कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि जस्ले मधेसीका मागहरु पार्टीभित्र उठाएर यी मुद्दा सम्बोधनको वातावरण धेरै अनुकुल पनि बनाउनु भएको छ उहाँ पनि चाहिन्छ। उहाँकै प्रयासले कांग्रेस जस्तो ठूलो र राष्ट्रिय पार्टीको सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतले पटक पटक मधेसका माग सम्बोधन गर्दछु भनिरहनु भएको छ। यसमा विमलेन्द्रजीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। उहाँले मधेसका जनताको माग सम्बोधन गर्न खेलेको भूमिका र उहाँको जन्म र कर्मथलो धनुषा भएको कारण पनि हामीलाई हरहालतमा निधि चाहिएको छ भन्ने दृष्टिकोण जर्बजस्त रुपमा आएको छ।
मधेसका मुद्दाले राष्ट्रिय मुद्दाको रुप दिएर सम्बोधन गर्न राजेन्द्र महतो र निधिमा कस्को बढि भूमिका रहन्छ?
मधेसका सर्वसाधारण पिछडिएका व्यक्तिहरु जो हामीले अधिकार पाएका छैनौं, हामी प्रति भएको अन्ययाको विरुद्ध आन्दोलन भयो भन्ने सोच्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरुले मधेसीको मुद्दा मधेसी दल र त्यीनका नेताले उठाएको भन्ने छाप रहेको थियो। तर, अहिले विस्तारै वास्तविकतालाई बुझ्दै आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन गर्दै कांग्रेस र कांग्रेसका उम्मेदवारलाई नै जिताउनु पर्छ भन्ने पक्षमा जनमत बढिरहेका छन्।
विगतका निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याउँदै आएको कांग्रेस केहि समय अगाडि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो। त्यसको प्रभाव अहिले कत्तिको पर्ला जस्तो लाग्छ?
हो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्वको कमिकमजोरीका कारण र टिकट वितरणमा भएको असन्तुष्टिका कारण परिणाम कांग्रेसको अपेक्षा बाहिर गएको थियो। तर यसपटक त्यसको प्रभाव पदैृन। त्यतिबेलाको परिस्थिती अथवा उम्मेदवार र अहिलेको प्ररिस्थिति फरक छ।
यहाँले भन्नु भयो, कि मधेसका मागको सन्दर्भमा राजेन्द्र महतोले धेरै संघर्ष गरे। राजनीतिक संघर्षको दृष्टिकोणले निधि र महतोबीचको तुलना हुन सक्छ र?
धेरै फरक छ। महतोजीको राजनीतिक आन्दोलन संविधान संशोधन मार्फत मधेसीको माग सम्बोधन हुनु पर्छ भनी केही वर्षयतादेखि सुरु भएको हो। मधेस आन्दोलनको इतिहास केही वर्षयताको मात्रै हो। जब देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएर नयाँ संविधान आयो भने यसमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार समान हुनु पर्छ भन्ने लगायतका मुद्दाहरु मधेसमा केही वर्षयता उठेको हो। तर, विमलजीको राजनीतिक जीवनको इतिहास विद्यार्थी जीवनदेखि नै ठूलो संघर्षबाट खारिएर आउनु आउनु भएको हो। मलाई याद छ, जतिनवेला २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो त्यसका लागि पनि उहाँले ठूलो संघर्ष गर्नु भएको थियो। विमलजीलाई सुट एट साइटसम्मको वारेन्ट थियो। उहाँ जनकपुरको सिमापारी बिहारमा र नेपालभित्र पनि धुनषाका विभिन्न गाउँमा भूमिगत भएर बस्नु परेको थियो। म अहिले पनि सम्झन्छु, त्यतिबेला बेला बेलामा मलाई उहाँको फोन आउथ्यो र भन्नु हुन्थ्यो जनकपुरका जनताले प्रजातन्त्रको पक्षमा आन्दोलनलाई साथ दिन यहाँको व्यापारिक समुदायले पनि सहयोग गर्नु पर्योे। यहाँका आम जनता र व्यापारिक समुदायसँग साँझ १५ मिनेट बत्ति निभाएर पञ्चायतको विरोध गर्न सहयोग माग्नु हुन्थ्यो। यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन उहाँको ठूलो भूमिका रहेको थियो। त्यतिबेलादेखि आजसम्म उहाँ हमेशा प्रजातन्त्र र जनताको अधिकारका लागि संघर्ष नै गरिरहनु भएको छ। त्यसैले राजेन्द्र र विमलजीमा धेरै फरक छ र तुलना नै हुन सक्दैन।
अर्थात अहिले भइरहेको मधेसी लगायतका समुदायको अधिकारको लडाइको आधार भनेको प्रजातन्त्र पुर्नबहालीका लागि विमलेन्द्रहरु जस्ता प्रजातन्त्रवादी नेताहरुले लडेकै लडाइको आधारमा तय भएको हो त?
हो, त्यतिबेला विमलजी लगायतका नेताहरुले ठूलो संघर्ष गर्नु भयो। पटक पटक उहाँ जेलमा पर्नु भयो। प्रजातन्त्रकै लागि उहाँले पक्राउ पूर्जिदेखि निवासित जीवन समेत विताउनु परेको थियो।
अहिले जनकपुरका जनताको अपेक्षा राजेन्द्र महतो वा विमलेन्द्र निधि कुन हो जस्तो लाग्छ?
अहिलेको चुनावमा जनताको अपेक्षा के छ भने विमलजीले निर्वाचित भएर गएपछि मेधस र मधेसी जनताको माग सम्बोधन गराउन, संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रिय भूमिका खेल्नु होला भन्ने ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। त्यसपछिको अपेक्षा भनेको समग्र धनुषाको विकासको अपेक्षा हो।
यहाँले अघि भन्नु भयो कि यहि क्षेत्रमा जन्म र कर्म गरेको भन्नुको अर्थ अहिलेको अवस्थामा मधेस प्रदेश मधेसीको हो भने जनकपुर जनकपुरियाको हो भन्ने हो?
धनुषाधाम यो क्षेत्रकै केन्द्रविन्दु हो। यस क्षेत्रमा राजनीतिक रुपमा विमलजी एकदमै महत्वपूर्ण नेता हो। उहाँ संलग्न रहेको नेपाली कांग्रेस यो देशकै पुरानो र सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रवादी पार्टी हो। मुलुककै एतिहासिक पार्टीको नेताका रुपमा विमलजीको हैसियत माथि छ। यस जिल्लामा कांग्रेसका अरु पनि नेताहरु जस्तै लिला कोइराला, जस्को श्रीमान शहिद हुनु भएको थियो। विमलजीकै उमेरका अरु पनि नेताहरु छन्।
होइन मेरो प्रश्न भनेको मधेस मधेसीको भनेजस्तै सर्लाही सर्लाहीका राजेन्द्र महतोको, धनुषा धनुषाकै विमलेन्द्र निधिको भन्ने नारा पनि सुनियो। यो कति सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ?
प्रचार प्रसारका क्रममा जनताले अहिले यो नारा लगाउन थालेका छन्। राजेन्द्र महतोलाई मैथिली शब्दमा (बहरिया) बाहिरबाट आएको हो भनेर भन्न थालेका पनि छन्। यसलाई अझ परिमार्जित भाषामा टुरिष्ट क्याण्डिडेट भन्ने गरेका छन्। उम्मेदवार भनेको त फिक्स्ड हुनु पर्छ। भलै संविधानले जो कोहीलाई जहितहिबाट उम्मेदवार बन्न छुट दिएको छ। तर कुनै पनि क्षेत्रमा त्यहि जन्मे, हुर्केर त्यस क्षेत्रको भलाईका लागि कर्म गरेकै व्यक्ति हुनु पर्छ। बाहिरबाट आएर हुँदैन भनि जनताले नै बोल्न थालेका छन्। महतोजीले आफ्नै जन्मथलोमा उम्मेदवार बन्नु भएको भए हुने थियो।
तपाईले अहिले भनेका विषयहरु जनताका माझमा गएर निधिको पक्षमा माहोल बनाउन प्रभावकारी रुपमा भन्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ र?
हो, मैले जति सकेको छु कांग्रेस र यसका उम्मेदवारको विषयमा बोलिरहेको छु। नेपाली कांग्रेसको पक्षमा भएका जुलुस, सभादेखि मलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार मेरो क्षेत्रमा मैले बोलीरहेको छु।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व लिएको कांग्रेसले फोरमका नेताहरु उपेन्द्र महतो, अशोक राईदेखि राजपाका महन्थ ठाकुरको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएन। तर यहाँ त मधेसी दलकै नेताले उम्मेदवारी दिए। यसलाई कसरी लिनु भएको छ?
हो, कांग्रेसले बडो उदारता देखाएर उपेन्द्र, महन्थ लगायतका नेतालाई समर्थन दिएपछि उनीहरुले पनि राजनीतिक इमान्दारिता देखाएर यहाँ कांग्रेसका विमलजीलाई समर्थन दिनु पर्दथ्यो। त्यो गर्न नसक्नु मधेस केन्द्रीत दलको कमजोरी हो। लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरुबीचको आपसी प्रतिस्पर्धाले एकतिर आपसी विश्वासमा कमि आउछ।
महतो र निधिबीचको तुलना नै हुदैन भन्ने हो भने अहिले यहाँका जनताबीच निधिको विषयमा किन अन्यौलता छ त? के कमिकमजोरी छ र के सुधानुृ पर्ला?
सबै नेता वा मानिसमा कुनै न कुनै कमिकमजोरी रहेका हुन्छन्। सतप्रतिशत सर्वगुण सम्पन्न कोहि मानिस हुँदैन। तर मेरो विचारमा केही वर्षयता विमलजीले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। जस्तो पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा नै दुई पटक मन्त्री भएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा उहाँको पुरानो तीन नम्बर क्षेत्रको विकासमा धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ। त्यहाँका मानिसहरुले नचिताएको र अपेक्षा नै नगरेको विकास निर्माण र सडक विकासको सञ्जाल नै विस्तार गरिदिनु भयो। त्यसैगरी धेरैवर्षदेखि प्रयास गरिरहेको राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन बनाउनु भयो। यो धनुषाको शिक्षा र संस्कृतिको विकासमा कोशेढुंगा नै हो। यो साना तिना प्रयासले सम्भव थिएन। त्यसैगरी सिमाबाट जटहीहुँदै ढल्केवरसम्म दुई लेनको सडक बनाउन पनि कठिनाइ हुने अहिलेको अवस्थामा उहाँले ६ लेनको सडक बनाउनु भयो। जुन कुरा धेरै ठूलो उपलब्धी हो। त्यसैले पनि उहाँको जनाधार धेरै बलियो भएर गएको छ। यो सडकको विषयमा म उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुनु भन्दा अगाडि नै सिन्धुलीका सूर्यबहादुर श्रेष्ठ जो नेपाल सरकारका सडक सम्बन्धी विज्ञ थिए उनले त्यतिबेला भनेका थिए, कि यो बाटो खुलाउन र विस्तार गर्न सकियो भने कलकत्तादेखि आउने ठूला मालबहाक ट्रकहरु दरवंगा हुँदै जटही र जनकपुरबाट वर्दिवास जोड्न सकिए जनकपुरको ठूलो विकास हुन सक्छ र सिन्धुलीबाट काठमाडौ जान सकिन्छ। अहिले धेरै पुरानो कुरा विमलजीले यो बाटो विस्तार गरेर नेपालको लागि छोटो बाटो बनाउने काम भएको छ। नेपालमा रेलवे लिंक विकास गर्न सकियो भने मालढुवानीमा सस्तो र सुरक्षित हुने कुरा अहिले विमलजीले अघि बढाएर धनुषालाई व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गराउदै हुनु हुन्छ।
मधेस र मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा क्षेत्रीय दलबाट सम्भव होला कि राष्ट्रियस्तरको दल र नेताबाट बढी सम्भव हुन्छ?
अहिले उठेका मुद्दाहरुको सम्बोधन राष्ट्रियस्तरकै दलबाट हुनु पर्छ। केन्द्रमा तीनवटा दल मुख्यरुपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै रहेका छन्। एमाले र माओवादीले मधेसका मुद्दा र माग कुनै हालतमा सम्बोधन गर्न चाहदैनन र सक्दैनन पनि। किन भने एमाले नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै मधेसका मागका विषयमा अत्यन्त नकरात्मक राजनीतिक संस्कार र सोचाइ देखाउनु भएको छ। एमालेसँग मिल्न पुगेको माओवादीले पनि गर्दैन। त्यसैले कांग्रेसले मात्रै यी माग पूरा गर्न सक्दछ। जुन कुरा कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दामात्र होइन भारत भ्रमणमा जाँदा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सन्देश दिनु भएको छ। जुन अरु दलले गर्नै सकेनन्।
दुई नम्बरमा मात्रै केन्द्रीत दलले भन्दा राष्टिय पार्टी कांग्रेसले नै गर्न सक्छ भन्ने विश्वास तपाइको हो?
हो, यी सबै कुराको सम्बोधन कांग्रेसले गर्न सक्छ। यसका लागि मधेसी जनता र मधेसी दलले उसलाई साथ दिएर कांग्रेसको अगाइमा अगाडि बढ्नु पर्छ।
अहिलेको राजनीति क्षेत्रीयहुँदै जातिय, समुदाय केन्द्रीत हुन पुगेको छ। तर यहाँ जुन साहुजी समुदाय छ त्यसले अहिलेसम्म यहाले भनेजस्तो कांग्रेसको पक्षमा खुल्न अझै किन नसकेको होला?
जनकपुरमा खासगरी (वैश्य) व्यापारिक साहुजी समाजको बढी छ। उनीहरुको स्वाभाव हेर्दा उनीहरुमा लक्ष्मी अर्थात धनधान्यको कृपा बढि र सम्पन्न भएपनि सरस्वतीको कृपा अर्थात राजनीतिक क्षेत्रमा त्यति अगाडि आउन चाहेको र सकेका छैनन्। उनीहरु गुण र दोषका आधारमा भोट दिने गरेका छन्। यतिसम्म कि यहाँको साहु समाज राजनीतिक शब्दमा किङमेकर अर्थात उसले जसलाई मत दियो उसले जित्ने गर्छ।
यहाँको साह समुदाय अझै नलागेको किन होला?
साहु समाजका मानिसहरुले मत दिने गरेपनि उनीहरु आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त छन्। तर केही सचेत मानिसहरु जसले राजनीतिमा चासो लिन्छन्, उनीहरु लागेका छन्। अहिले जनकपुर तातिएको छ।
पूर्व मेयर पनि भएको नाताले जनकपुरवासीलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ?
म नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य भएको नाताले पनि मधेसका मागहरु सम्बोधन हुनु पर्छ। माग पुरा गर्न माग राख्ने एउटा कुरा हो। त्यसलाई पूरा गर्ने अर्थात राष्ट्रियस्तरबाट दिने हैसियत भएको पार्टी पनि चाहिन्छ। त्यो भनेको अहिले कांग्रेस नै हो। किन भने यसका सभापतिदेखि नेता निधिसमेतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसैले हामी सबैले यो पार्टीको पक्षमा बहुमत जुटाउन लागि पर्न अपिल पनि गर्दछु।
Prevपछिल्लोपत्रकारलाई निवृत्तिभरण र छात्रवृत्ति दिइने
अघिल्लोलोडरबाट राजनीतिमा लागेका महतोलाई निधिको प्रश्नः जनअधिकारका लागि जेल गयौ?Next
कोउन्टिन्हो लोनमा बार्यन जाँदा ग्रिजमनले किन पाएनन् ७ नम्वर जर्सी
रोनाल्डोलाई मुद्धा हाल्ने अर्को प्रपञ्च रच्दै अमेरिकी मोडल
एसइईको ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा विद्यार्थीभन्दा निरीक्षक धेरै
मेस्सीकै लागि बार्सिलोनाको नेयमार भित्र्याउने प्रयास !